A na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ: LMDE 2 Cinnamon na LMDE 2 Mate | Site na Linux
M na-echeta oge ndị ahụ mgbe mbụ ha wepụtara LMDE (Mint Debian Mint Linux), Abụ m onye ọrụ nke Debian na-enweghị iche echiche ugboro abụọ m nakweere nkesa a dị ka ụzọ mbụ m. Mgbe ahụ nsogbu ndị ahụ na nkwado ya na ndozi ya bidoro, na-eme ka Ikey Doherty mepụta ụdị nke ya bụ ọrụ na-ekwesịghị ịkọ, maka na ọ nwụrụ otu ahụ, na-enweghị ịdọ aka na ntị.
Ma o doro anya na ụmụ nwoke si Mint Linux Ha ghọtara na Obodo ha dị mkpa, na ihe Community chọrọ ka ha nye ha. Ọ bụ ya mere ha ji akpọsa mwepụta nke Cinnamon LMDE 2 y LMDE 2 Matte. Echere m, anyị nwere oge ọzọ nke Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Mmmmmmmmmmmm
1 Ihe dị ọhụrụ na LMDE 2 Cinnamon
2 Kedu ihe dị na LMDE 2 Mate
3 LMDE 2 Njikọ Njikọ
Ihe dị ọhụrụ na LMDE 2 Cinnamon
Ihe kacha nta iji chọọ nkesa a bụ:
512MB RAM (1GB akwadoro).
9GB nke ohere diski (20GB akwadoro).
Ihe eserese nwere mkpebi 800 × 600 (1024 × 768 tụrụ aro).
DVD ma ọ bụ USB maka ntinye.
Ọ bụrụ na ị ka na-eji LMDE 1, ndị otu mmepe na-akwadebe ngwugwu mmelite, yabụ ị ga-eche ntakịrị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwale LiveCD, aha njirimara bụ "mint" ma anyị na-enweta enweghị paswọọdụ. Ma nke ahụ bụ ya. I tụrụ anya ihe ọzọ? Ọ bụ otu ihe ahụ ochie Cinnamon na ya ndozi na ahụhụ fixes.
Kedu ihe dị na LMDE 2 Mate
Otu ihe ahụ, na Cinnamon, ọ nweghị ihe ndị Linux Mint na - emeghịzi maara, mana kama inwe Ubuntu dị ka isi, ha nwere Debian Ihe ndị achọrọ maka LMDE 2 Matte bụ otu ihe ahụ maka Cinnamon LMDE 2Ọ bụ ezie na enwere m obi abụọ ọ bụla nke ukwuu, echere m na site na nwunye ị chọrọ obere ihe.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịchọta ụfọdụ nsogbu na isiokwu GTK ma ọ bụ akara ngosi mgbe ịmalitere nnọkọ ahụ (opekata mpe na LiveCD), yabụ ụmụ okorobịa nọ na Linux Mint na-atụ aro ka anyị mee ihe ndị a: anyị mepere ọnụ wee tinye:
Ihe ọzọ anyi kwesiri iburu n'uche bu na ha adighi akwado anyi ka anyi jiri YUMI ma obu ihe omume obula meputa otutu USB, n'ihi na LMDE adighi aru oru.
LMDE 2 Njikọ Njikọ
Budata LMDE 2 Cinnamon Budata LMDE 2 Mate
ma nke ahụ bụ ezigbo ndị enyi niile .. Nwee obi ụtọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Bilie Onye Nwụrụ Anwụ: LMDE 2 Cinnamon na LMDE 2 Mate
Ọ bụghị ihe ọjọọ, mana gịnị kpatara m ga - eji họrọ nke a ọ bụghị Ubuntu ma ọ bụ Debian n'onwe ya?
Na obere kọmputa dị ka nke m na-edezi, echere m na nhọrọ kachasị mma bụ ịwụnye LMDE Mate. Ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Naanị ihe ngosi bụ na enweghị m ike ibudata vidiyo YouTube ma eleghị anya, ikekwe, ọ dị nwayọ nwayọ. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ịhazi ya nke ọma. Enweghi ike iji ya tụnyere Gnome-Shell n'ihe gbasara ọsọ ma ọ bụ ịdị mma mana n'ime ya enwere m ike ime otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na m jikwa Arch ma ọ bụ OpenSUSE: Gee ezigbo egwu, dee akwụkwọ ma bipụta ya, ma ọ bụ nyochaa ya, jikọọ na andntanetị ma hụ email m wdg. Echere m na ndị okike nke nkesa a nwere ike afọ ojuju n'ọrụ ha n'ihi na ha arụzuola ya nke ọma.
Enwere m ike ime otu ihe na Ubuntu ma ọ bụ Debian ...
Nwere ike ibudata vidiyo vidiyo site na njikwa na youtube-dl
aptitude wụnye youtube-dl
youtube-dl njikọ njikọ vidiyo
ichere maka ya ibudata wee laa.
Mana maka obere ihe m chere na debian na lxde zuru oke.
Nwere ike ịhọrọ nke ga-adịrị gị mma, dabere na mmasị gị ma ọ bụ mkpa gị.
N'ihi na debian na-enye ọtụtụ ntinye nrụnye n'oge na-adịbeghị anya. Nwere ike iwunye nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwee gaa debian.
Iji bụrụ "ọkụ" ha chọrọ ọtụtụ ebe nchekwa.
Frank, edeziri m okwu gị. Anyị achọghị mkparịta ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na blog a. Cheers
Ha nwere ike ịkpọ ya ihe ọ bụla masịrị ha. N’ụlọ onye ọ bụla, onye nwe ya na-etinye iwu ka ọ chọrọ. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ime ngagharị iwe ma ọ bụ ihe ọ bụla, chọta ebe ahụ, DesdeLinux agaghị abụ ebe ga-enye ohere maka arụmụka nke ụdị ọchịchị. 😉
ndi burjans dijo
Ha akwụsịghị ịsị na ha na-arụ ọrụ na 512 MB nke RAM ma ejiri m n'aka na ọ bụghị eziokwu, »ikekwe» MATE ga-eme ya, ịwụnye na ebe nchekwa a apụtaghị na mgbe arụnyere ya, ọ ga-agagharị, dị ka mgbe niile ka nduhie, ihe yiri ya mere m na mbụ ChalettOS, obere ezi obi na nghọta anaghị egbu onye ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, Debian enweela Cinnamon na ntinye ya, ọ bụghị otu ụdị ahụ, mana ejiri m n'aka na a ga-elekọta ya karịa nke mbụ.
Ọ bụ naanị echiche dị umeala n'obi m, enwere m obi ụtọ na Debian 8 + Xfce nke na-agba ọsọ na 512 MB nke RAM.
Zaghachi ndi burjans
Enwere m LMDE1 na pc na 512 mb nke ebule ma enwere m ike ijide gị na ọ bụ distro kachasị dị egwu nke gafere m. Enwere m ike ịrụ ọrụ 3 na 4 n'otu oge, ma ọ bụ jiri ntanetụ 8 na -achọ olileanya. N'ihi ya, m na-enye okwukwe na ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na 512 mb nke ebule, ọ bụkwa ya kachasị mma nke meworo ya, nke ka mma karịa XP (ọ bụ enweghị ike iji ya mee ihe), karịa Lubuntu 14.04 (nke nwere ike igbu ndị fans ahụ n'elu ) ka mma karịa Lubuntu 12.04 (nke ịbụ ụdị nkwado, ọ bụghị LTS nyere ezughị oke ime). Enwere m ike ịsị na LMDE na arụmọrụ bụ mkpuru, na nkwụsi ike anaghị m agwa gị. Amaghi m ihe ahụhụ bu, amaghi m ihe cracking bu ... gini ka i na-agha banyere LMUD? N'ezie, mana na arụmọrụ na ntụkwasị obi, enweghị isi nke ntụnyere
A bit sensationalist gị kwuru, m na uche. Na ahụmịhe m na 1gb nke ebule, ha niile na-eme otu ihe ahụ ma na-aga ọsọ ọsọ, ọ dabere na gburugburu desktọọpụ ị na-eji na otu ị si hazie ya, nke ahụ gụnyere ịkọkọta ihe niile. Na ebule 512 ma ọ bụ jiri 30 nke ebule ọ ga-abụ otu.
"Amaghị m ihe mmejọ bụ."
Cheregodi, mana echere m na n'ihi GNU / Linux, anyị kwesịrị ịkwụkwu aka ọtọ. M gbalịrị ọtụtụ distros na niile, nile, nwere njehie ha. LMDE kwa. Ekwenyere m na maka onye LMDE, Debian, Fedora, Arch, ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ naghị enye nnukwu nsogbu ma ha ewere ya dị ka ihe siri ike. Ma enweghị mmejọ? Have nwetụbeghị nsogbu mgbe nwụnye si Software Manager ma ọ bụ na mmelite? Nwetụbeghị nsogbu Firefox ma ọ bụ MPlayer? Nwetụbeghị nsogbu ịmepe ngwa, ma ọ bụ PulseAudio kwụsịrị? Bịa gawa. Ugbu a ọ na-apụta na distros niile dị ukwuu na kọmputa niile ma e wezụga m, ebe ihe na-eme mgbe niile, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị njọ.
Na ibe LMDE 2 n'onwe ya ekwuru na enwere mperi na mbido, "isiokwu Gtk na akara ngosi enweghị ike ibu". Mana ọ dịghị mkpa, n'ezie mmadụ bịara na-ekwu na LMDE 2 enyeghị ha njehie ọ bụla, 🙁. Anaghị m ekwu nke a maka gị, Arazal, ị na-ekwu na ị na-eji LMDE 1.
Debian nwere lxde gbara 128 ka 256 mb.
mario rojas dijo
Ọrụ LMDE nọgidere n'aka Schoejle ma kpọọ ya
SolydXK. O nwere desktọọpụ abụọ: LXDE na KDE.
Zaghachi Mario rojas
Echere m na ọ bụghị LXDE na KDE, kama XFCE na KDE.
N'uche m, LMDE abụghị otu n'ime ike nke Mint. M kwụsịrị iji ya ogologo oge gara aga n'ihi na mmelite mkpọ na-emebi usoro m mgbe niile. Agbalịbeghị m ụdị ọhụrụ a, enweghị m ike ịza ajụjụ.
Na agbanyeghị n'echiche m SolidX (Xfce) na Solid XK (KDE) na-arụ ọrụ nke ọma.
Enweghi ngwụcha Fromlinux n'ihi na ị bụụrụ m nnukwu ajụjụ, ebe m nwere LMDE ugbu a na laptọọpụ ochie nke gbakee, yana ozi ọma na mmelite ahụ apụtaghị, enwere m obi abụọ ma ma ụdị ihe a ọ ga-eme. . Ya mere daalụ nke ukwuu
Ma kwa n'ihi na enwere m obi ụtọ ịhụ nhụjuanya m ebe ahụ na ọ bụ onye ama ama kwesịrị ya, na Mint enyeghị ya ya, mana ọ bụ nnukwu ma dabere na arụmọrụ isi obodo ọ na-egosi. Daalụ nke ukwuu
lmde resurfaces na fedora 22 nke ikpeazụ na-egbu oge ruo mgbe ọgwụgwụ nke may
hey elav iwe megide debian ogologo oge ole ka ị nọrọ na jessie na nke ahụ?
Iwe maka Debian? Jessie na a mebere? Amaghị m ihe ị na-ekwu 😛
Ha anwụghị, ha na-eri oriri ... 😛
Zaghachi na Mgbe
Aga m etinye Ubuntu Mate na laptọọpụ m, ebe m nwere LMDE ugbu a, mana m ga-echezi nwelite ahụ iji hụ otu ihe si arụ ọrụ.
M na-eji mac n'afọ 2001, ọ bụ 4 ghz g1.25 e-mac, ya na mgbakwunye 32 mb video na, 1 gb ebule na 320 gb IDE diski ike….
... mgbe ị gbalịsịrị distros ole na ole enwere ike itinye na ppc, ọ nweghị ihe dị mma ma ọ bụ karịa karịa debian wheezy na desktọọpụ MATE 1.8.1, ọ zuru oke n'ihe gbasara arụmọrụ, arụmọrụ, enwere ike ịhazi ya, ọ nweghị ihe ọ bụla, ndị anyị na-eji PC ochie, anyị nwere ekele karịa maka ndụdụ desktọọpụ nke ochie gnome2. Ahụghị m ihe ọ bụla na-atọ ụtọ banyere nke a site na LMDE, ọ bụ naanị debian nwere obere mgbanwe ọhụụ na ọfụma, ọ naghị agbakwunye ihe ọ bụla. Ọ bụghị ọsọ ọsọ ma ọ bụ karịa karịa ma ọ bụrụ na ị wụnye Debian gọziri agọzi na gburugburu ebe obibi ị họọrọ. Ọ na-agbanwe naanị na o nwere kpochapụwo lint mint, akwụkwọ ahụaja mara mma nke na-adịchaghị mma. Ọ dịghị ihe ọzọ. Aghọtaghị m ịnụ ọkụ n'obi nke ndị mmadụ na-eji GNU-Linux na LMDE a. Odighi ezi.
Eziokwu bụ mgbe m nwara LMDE n'oge ahụ mgbe ụdị izizi mbụ pụtara na ọ na-agwụ m ike, enweghị m ike ịhazi ọdịdị ahụ, yabụ dịka ọhụụ m bidoro ịgụ ma mechaa jiri LMDE na debian repos site n'inye ikike update && aptitude full-upgrade, nke Ọ bụụrụ m ihe ijuanya na gburugburu na akwụkwọ ahụaja gbanwere na nke ndị debian, yabụ kemgbe ahụ m na-eji nyocha debian kemgbe 2012.
Hapụ m ọhụrụ Linux MInt na KDE, nke bụ ebe m mụtara ihe ndị bụ isi nke Linux kemgbe 2008.
Raul Camacho na re Macho dijo
Ọ dị mma ịnwale distros, mana anaghị m ebi ndụ na ya, ya mere m wụnye Debian ule 3 afọ gara aga na ọ na-agba ọsọ kwa ụbọchị.
Ana m emepe ma ọ dịkarịa ala taabụ 40 chrome, (Achọrọ m ịhapụ ha ka ha meghee) + 5 Dolphin taabụ + 15 kate taabụ + filezilla + console + 2 ndebiri ndebiri = 4Gb nke RAM, enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2 n'efu. Ọ na-agbakwa ezigbo mmiri, efu kwụgidere, m na-agbanyụ ya kwa izu abụọ ma ọ bụ atọ ọ bụla ma ọ bụrụ na agaghị m eji ya ụbọchị abụọ.
Ekwadoro m Debian KDE (agara m ubuntu, kubutu, Arch, wdg)
Ekele si n'ụlọ m !!!
Zaghachi ka Raul Camacho el re Macho
Onwere onye maara ogologo oge ọ ga-ewe iji kwalite Betsy site na LMDE1? Ekwuru m ya maka ọ bụrụ na nke a na-azọpụta m mbipụta nke ịhazi na akụkọ ndị ọzọ ... ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ebe ọ bụ na, a na-eche (n'etiti ihe ndị ọzọ) na ọ bụrụ na ịhọrọ LMDE kama LMUD (Linux Mint Ubuntu Edition) ọ bụ n'ihi ị na-adịghị ga-aga si version ọ bụla x oge ma ị imelite na ugbu a
Ọ ga-adọrọ mmasị ịmata. Daalụ nke ukwuu
Ọfọn, m na-agbasi mbọ ike na nkewa ma amaghị m etu esi eme ha
na installer anaghị abịa na nhọrọ iji wụnye n'akụkụ windo ..
Echere m na ọ bụ ihe na-adịghị mma nke ụdị a
Zaghachi jose manuel
Mbipụta a abụghị nke kacha mma maka ndị mbido enyi.
Ahụrụ m onye mbido n'anya. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime unu nwere echiche ọ bụla iji wụnye ọzọ, ma ọ bụ otu esi echedo distro gị, na n'elu nke ị na-ekwu okwu.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nye echiche.
Tie mkpu ruo ndị nerfs.
Ezigbo enyi m, anọwo m na-eji Linux afọ 7 ma kwenye m na m ka na-ewere onwe m onye novice, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ihe dị mfe dịka nkebi ọ bụ n'ihi na ị ga-agụrịrị, n'ihi na ma ọ bụ na m maara na ọ bụ n'ihi idetuo-mado nke emere site na desdelinux na saịtị ndị ọzọ na-achọ ịntanetị, ọ bụghịkwa ihe siri ike, mana kwenye m na m tufuru ọtụtụ faịlụ na-anwale n'etiti ha edemede nke U. XD
Awụnyela m LMDE 2 Cinnamon na mpempe akwụkwọ Atom N455 2Gb RAM m yana yana diski SSD ma ọ dị mma, agbanyeghị na ịnyagharịa ị ga-adị mfe.
Ahụrụ m LMDE n'anya. Ọ bụ eziokwu na ọ nwere nsogbu ya, mana m na-eji LMDE 2, ya na Mate, kemgbe ọ pụtara, ọ dịkwa ebube. O nwere nchekwa na nkwụsi ike nke Debian, ịdị mma nke Mint, na ọsọ nke Mate. Agbalịrị m ọtụtụ distros, nke a bụ nke kachasị amasị m, aka ala.